Linux Mint inosimbisa nhau mbiri muna Zvita: yekare uye yekusimbisa | Linux Vakapindwa muropa
Linux Mint inosimbisa nhau mbiri muna Zvita: yekare uye chisimbiso
Zvinotaridza kuti munguva pfupi yapfuura Clement Lefebvre ari kupererwa nemazano, kana ndiwo manzwiro atinowana patinenge tichitaura kwevhiki rechitatu rakateedzana nezve hypnotic de Linux mint. Asi ndezvekuti, pamusoro pezvo, akaitawo zvimwechetezvo nehurongwa hwake paChromium, kunyangwe vhiki rega rega aipa zvimwe uye chekupedzisira chaakataura ndechekuti iye aive awana komputa ine simba kuti akwanise kuumbiridza kodhi nekukurumidza uye tumira pasuru kune ayo epamutemo marekodhi.
Asi zvataizoenda. Iyo Zvita 2020 tsamba nezve Linux Mint inogona kupfupikiswa mumapoinzi maviri: yechipiri, yakanyanya kuwanda, iri tsananguro nezve hypnotic, inova IPTV app iri kugadzirwa neMenta timu. Lefebvre anowedzera akawanda screenshots kutsanangura kuti isu tinokwanisa kuwedzera akasiyana TV masevhisi, VOD masevhisi (pane zvinodiwa) uye nekuwedzera M3U zvinyorwa, hapana chinhu chisingazivikanwe kune avo vedu vakamboshandisa rudzi urwu rwe software kare. Iyo beta inowanikwa pa Iyi link se DEB package, uye muAUR yevashandisi veArch Linux.
Linux Mint 20.1 Ulyssa iri kuuya paKisimusi
Semwedzi gumi nembiri yapfuura, Lefebvre akaendererawo mberi iyo inotevera vhezheni yesisitimu inoshanda, Linux Mint 20.1, inosvika mumwaka wekisimusi. Asi, kana isu tikateerera kune zvakaitika gore rapfuura, zvinosvika pamberi pezvi, pamwe pamberi paDecember 20, kunyangwe iyo yekupedzisira isiri yeruzivo ruzivo.
Kana iri nhau ichauya neLinux Mint 20.1 Ulyssa, zvishoma zvave zvichisimbiswa, asi kana vakasawedzera yavo inonamira manotsi app, ivo vachange vafambira mberi mukuvandudza kwavo, inosanganisira Celluloid ine Hardware yekumhanyisa inogoneswa nekutadza, zvatova nechokwadi chekuti yakagadziridzwa vhezheni yeChrome inogona kuiswa yemahara snapd uye WebApp Manager inogona kuita iro basa rekugadzira webhu kunyorera kuve nyore. Zvese izvi zvinosvika pamberi pekupera kwe2020.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux Mint inosimbisa nhau mbiri muna Zvita: yekare uye chisimbiso
Ini handizive kana paine kuneta kana kwete kwemazano, asi LM 20.1 haina kutaridzika yakaipa zvachose. Parizvino ini ndichiri muLM19.3; asi zvirokwazvo gadziridza kuna 20.1 painongobuda.
Ini handisi kunyunyuta kure nazvo, Linux Mint inondipa zvese zvandinoda chero bedzi chiri chinono asi chakachengeteka kukura, ndinofara.
Pindura kuna Arazal
Husiku Kumedza akadaro
KANA MAXESI ZVANDINODZIRA IYE MINXO, UNOGADZIRA ZVANDINO CAGO.
Pindura Kusiku Kumedza
Nei uchifanira kudzidza Python. A classic isingambofi yakabuda muchitaera.
PinePhone KDE Nharaunda Yenharaunda inogona iko zvino kuchengetwa